Daarood - Wikipedia
Daarood (; ) waa beel ka mid ah beelaha Soomaalida kuwaasi oo degan Geeska Afrika. Beesha Daarood waxaay degtaa wadanka Soomaaliya , Jubaland Galmudug iyo Puntland wadanka Itoobiya iyo deegaano ka tirsan wadanka Kiinya. Guud ahaan, beesha Daarood waxaa ka farcama reero badan oo ka mid ah Mareexaan: Absame, Harti (Majeerteen, Beesha Darawiish, Dishiishe iyo Warsangali) Lailkase iyo beelo kale.
Sunni Islam, Suufi, Ghair Muqallidiinta, Jama'atul Muslimin
Dir, Hawiye, Isaaq, Raxanweyn iyo qabiilo Soomaali kale
Daaroodku Wuxuu ku hadlaa lahjad isku mid ah waase jiri karaan waxyaabo yar yar oo lagu kala gedisnaan karo taas oo intii hadba isku deegaanii ay ereyada qaybtood isku si u adeegsadaan'ama ugu dhawaaqaan.
Asal ahaan shacabka Daarood waxay ka yimaadeen Dawlada Jabarta. Ismaaciil Jabarti wuxuu ahaa amir horseed iyo hogaamiye oo faafiyey diinta Islaamka gaar ahaana waxa uu ka soo degay meel u dhaw degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag waxaa uu mudo diinta Islaamka ka faafinayey dhulka Bariga iyo Bartamaha Geeska Afrika. Daarood waxaa dhashay Doombiro Dir.
Qabriga oday Daarood
Odaygii ay ka soo tafiirmeen beesha Daarood wuxuu ku aasan yahay magaalo la yidhaahdo Haylaan, taasi oo 35 km u jirta magaalada Badhan ee waqooyi-bari gobolka Sanaag, Soomaaliya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daarood&oldid=216790"
Last edited on 14 Sebteembar 2021, at 15:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2021, marka ee eheed 15:33.